Affaaritti hojjetoota Ministeera Barnootaa lama dabalatee namoonni 10 ajjeefaman – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAffaaritti hojjetoota Ministeera Barnootaa lama dabalatee namoonni 10 ajjeefaman
Affaaritti hojjetoota Ministeera Barnootaa lama dabalatee namoonni 10 ajjeefaman
Hojjettootni Ministeera Barnootaa lama Naannoo Affaar ganda Gadaamaayituu mana barnootaa tokko keessatti hordoffii deeggarsa barnootaa osoo taasisanii ajjeefamuu naannichi beeksise.
(bbcafaanoromoo)–Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii naannichaa obbo Ahimad Kaalaayitii BBC’tti akka himanitti guyyoota lamaan darban haleellaa qaamoleen hidhatan raawwataniin hojjettoota lamaan dabalatee namootni nagaan 10 ajjeefamuus himan.
Weerara Covid-19 sababa gochuun manneen barnootaa cufaa turan amma barnoota eegaluu isaanii hordofeetii hojjettootni ministeerichaa gara Affaar kan imalan.
Hojjettoonni ajjeefaman obbo Mulaata Tsaggaayeefi obbo Ababaaw Ayyaalnah jedhamu.
Akka ibsa obbo Ahimaditti Wiixata darbe A.L.I Onkololessa 16 halkan sa’aa 10’tti haleellaa hidhattootni horsiisee bultoota Aanaa Galaloo ganda Sarkami fi Teelee jedhaman keessatti bananiin namoonni saddeet ajjeefamaniiru.
”Haleellaa Shororkeessitootaati” jechuun haleellaa ibsan kanaan kan xiyyeefannoo keessa galan daa’immaniifi haadholii ta’uus obbo Ahimad himaniiru.
Hojjetootni Ministeera Barnootaa ajjeefamaniis gareedhuma Obbo Ahimad ‘shororkeessaa’ jechuun ibsaniin akka raawwatame himaniiru.
Torban muraasa duras miidhaa lolaan naannichatti qaqqabsiiseen namoota miidhaman gargaaruuf garee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaarraa garasitti imalerratti haleellaan raawwatamee miseensi qaama nageenyaa tokko ajjeefamuus himaniiru.
Haleellaan kun daandii guddaa Itoophiyaa fi Jibuutii wal qunnamsiisurratti kan raawwatamaa jiru ta’uufi gochi akkanaa kun gosa Somaalee Isaa jedhamu dahachuun kan gaggeefamu ta’uun himameera.
Gareen kun duraan daldala kontiroobaandii gaggeessaa ture jechuun amma ‘fayidaan isaanii waan tuqameef jijjiirama kana gufachiisuuf hojjetu’ jedhan.
Gareen kun riphanii tasa haleellaa qaqqabsiisaa jiruu kan jedhan qondaalli naannichaa, konkolaachiftootni fe’isaa xiyyeeffannoo garee kanaa akka ta’anillee himan.
Daandiin kun daandii biyyattii biyya ollaa waliin walqunnamsiisu waan ta’eef qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa nageenya naannichaa mirkaneessuuf waan danda’an hojjechaa jiruus jedhaniiru.
”Humnoonni hojiin kontiroobaandii jalaa hafe kun qindaa’anii haleellaa shororkeessummaa qaqqabsiisaa waan jiraniif naannoon Somaalees ta’e qaamoleen kaan balaaleffachuu qabuu” jedhan obbo Ahimad.
”Sabni Isaa kan naannoo Gadaamaayituu jiraatu qaama isaan keessaa bahee miidhaa geessisee deebi’un falmuu qaba, namni fuula haaraa yoo mul’atees dursee qaama nageenyaaf himuu qaba” jedhan.
”Golgaa humna kanaa ta’uurra ofirraa ittisuutu wayyaas” jedhan.
Haleellaawan akka kanaa wayita naannichi balaa lolaan miidhametti qaqqabuun gaddisiisaa ta’uullee dubbatan.
Mootummaan Naannoo Affaar qaamolee nageenyaa dhimmichi isaan ilaallatu waliin ta’uun rakkoo naageenyaa naannicha keessa jiruuf fala waaraa gochuuf akka hojjetu ibsameera.
Hojjettootni Ministeera Barnootaa A.L.I Onkolessa 13 ture naannichatti sirni baruuf barsiisuu eegale hordofuuf Finfiineerraa kan imalan.
Guyyaa kaleessaa Aanaa Gadaamaayituu jedhamutti mana baranootaa keessatti hojii isaanii hojjechaa osoo jiranii rasaasa qaamolee hidhataniin ajjeefaman.
Daayireektarri Kominikeeshinii Ministeera Barnootaa Aadde Hareguwaa Maammoo hojjetootni ministeerichaa barnootni weerara koronaavaayirasiin booddeetti hafee akkamiin akka itti fufuufi barattoota dubaraa barnootarraa duuba hafaa jiran gargaaruuf achitti argamanii jedhan.
Reeffi hojjetoota Ministeera Barnootaa lamaan har’a gara Finfinneetti yoo dhufu Ministira Barnootaa Getaahuun Makuriyaa(PhD) fi hojjetoota waajirichaa biroon simatameera.
Hojjetoota ajjeefaman lamaan alatti hojjetaan ministeerichaa rasaasaan rukutamanii lubbuun oolan obbo Damissee Taammiree ammoo waldhaansi fayyaa godhamaafi akka jiru Ministeerri Barnootaa ibseera.